Hoteelada Magaalada Krakow | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Guryaha, General, Poland
Krakow waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn uguna muhiimsan Poland, isagoo maanta ah meel aad loo dalxiis tago. Sababtaas awgeed ayay boqolaal dad ah u doortaan magaalada inay tahay meel loo dalxiis tago sannad kasta, sidaasna ay ku billaabato raadinta hudheelka ugu habboon ee la dego inta ay booqanayaan meelaha muhiimka ah ee magaalada.
Waxaan arki doonaa qaar ka mid ah indhaha iyo sidoo kale kuwa ugu fiican hudheelada si ay u sii joogaan magaalada Poland ee Krakow. Marka waxaan fikrad ka heli karnaa meelaha quruxda badan ee magaaladani leedahay oo aan ku dul dhigno liistadayada meelaha cusub ee la booqanayo.
1 Maxaan ka arki karnaa magaalada Krakow
2 Xagee joogaa Krakow
3 Hoteelka Unicus Hotel
5 Hotel Balthazar Design
Maxaan ka arki karnaa magaalada Krakow
Magaalada Old waa mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan magaaladan oo ah meelaha ugu muhiimsan ee xiisaha leh. Waxay ku taal aaggan oo aad ka arki karto fagaaraha Suuqa oo aad u ballaadhan oo ballaadhan, oo ah halka Hoolka Dharka, Basilica-ka Santa María iyo Taallada Guryaha Magaalada. Meel sare waa meesha Wawel Castle iyo Cathedral. Qodobka kale ee xiisaha leh ee la booqdo waa xaafaddii hore ee Yuhuudda ee la aasaasay qarnigii XNUMXaad ee loo yaqaan Kazimierz. Dhexdeeda waxaad ka arki kartaa sunagogyada ama Matxafka Qoomiyadda. Maanta sidoo kale waa aag aad u casri ah oo dib loo habeeyay. Magaaladaan waxaad sidoo kale booqan kartaa warshadda Oskar Schindler, oo ah ganacsade si qarsoodi ah u awooday inuu badbaadiyo nolosha kumanaan Yuhuud ah ganacsigiisa.
Xagee joogaa Krakow
Mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee lagu nagaan karo magaalada waa xarunta taariikhiga ah. Gaar ahaan maxaa yeelay haddii aan sii joogno aaggii hore waxaan si fudud u arki karnaa aagagga xiisaha u leh magaalada, iyada oo aan barakac badani badnayn. Magaalada gudaheeda waxaa ku yaal hudheello xiiso leh, in kasta oo ay jiri karaan fursado kale oo hoy ah sida guryo dabaqyo ah ama hudheelo jaban. Markan waxaan arki doonnaa qaar ka mid ah hudheelada ugu wanaagsan magaalada.
Hoteelka Unicus Hotel
Huteelkani wuxuu ku yaal meel dhawr mitir u jirta Basilica-ka Santa Maria, oo ku taal magaalada hore. Waa hudheel casri ah oo qurux badan oo ay ku yaallaan laba maqaayadood, halkaas oo aad ku tijaabin karto cunnada Talyaaniga ama Boolandka. Laakiin hudheelkan ayaa ka sarreeya wax walba maxaa yeelay wuxuu leeyahay xarun u gaar ah ama xarun caafimaad. Gudaha Martida aagga spa waxay quusin karaan barkadda gudaha, ku naso qolalka qoraxdu fadhiistaan, ku raaxee fadhiga duugista ama u aado sawnada. Waxay sidoo kale leeyihiin goob jimicsi oo firfircoon waxayna ku siinayaan noocyo kala duwan oo wajiga iyo daaweynta jirka ah si aad naftaada u kabuubiso. Qoysasku waxay yeelan doonaan adeeg daryeel ah iyo kuwa ganacsi sameeya qol munaasabad ah. Qolashiisa waxay u taagan yihiin codadkooda dhexdhexaadka ah iyo xarrago, oo leh raaxo iyo ballac ballaaran. Qolalka waawayn oo waasac ah, oo leh meel fadhiga, qolka dharka lagu qubeysto, iyo tas-hiilaadyada shaaha / kafeega lagu sameeyo. Intaas waxaa sii dheer, waa hudheel leh adeeg dhigasho sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho gaarigaaga.
Hoteelkan oo ah shan xiddig ayaa leh astaamaha joogitaanka a Dhismaha Renaissance ee ku yaal xarunta taariikhiga ah. Qurxinteeda waxay isku daraysaa guridda iyo rustic casri ah, oo leh saqafyo alwaax ah iyo dabka dabka. Si kastaba ha noqotee, qolalka sidoo kale waxay leeyihiin musqusha marmar casri ah, isku xirka internetka iyo telefishanka. Terrace-ka waxaad ku raaxeysan kartaa aragtiyo cajaa'ib leh oo magaalada ah waxayna leedahay makhaayad tayo leh oo lagu taliyay Buugga Michelin. Dhanka kale, aaggeeda spa waa mid la yaab leh, oo leh barkado gudaha ah oo ku yaal aagga hoose, oo leh foolal duug ah oo duug ah. Hoteelkani wuxuu kaloo leeyahay hudheello dhameystiran oo leh duugisyo kala duwan, daaweyn qurux iyo jimicsi. Huteelku wuxuu aad ugu dhow yahay Wawel Castle oo leh aragtiyo.
Hotel Balthazar Design
Hoteelka Balthazar Design ayaa sidoo kale ku yaal meel u dhow Wawel Castle. Huteelkan ayaa leh qurxinta iyo qurxinta qurxinta ee daryeela dhammaan faahfaahinta. Qolalka si shaqsi ah ayaa loogu sharraxay qaybo casri ah iyo guryo. Way waasac yihiin waxayna leeyihiin minibar yar iyo TV shaashad leh. Qaarkood waxay leeyihiin qol fadhigooda si qurux badan loo qurxiyo. Hoteelkani wuxuu bixiyaa adeeg aad ufiican, wuxuu abaabulaa dalxiisyo u dhow sida kan macdanta milixda. Martidu sidoo kale waxay ku raaxeysan karaan duugista waxayna ku leeyihiin cunno macaan makhaayada cunnada Polish-ka.
Huteelkan casriga ah waxay ku taal aagga ugu nolosha yar uguna da'da yar magaaladad, meeshuu ahaan jiray rubucii hore ee Yuhuudda. Kuwa doonaya inay ogaadaan aagga ugu badalan ee Krakow. Hoteelkani wuxuu leeyahay adeegyo xiiso leh, sida baaskiilado bilaash ah oo magaalada lagu dhex wareejiyo. Waxa kale oo ku yaal xarun jimicsi iyo aag teeras ah. Martidu waxay ku kulmi karaan qolka nasashada ee la wadaago waxayna ku dhex leeyihiin makhaayadeeda cunno macaan. Waxay u taagan tahay quraacdeeda weyn waxayna bixisaa adeeg wareejin ah garoonka diyaaradaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Hoteelada Krakow
Ayamonte, oo ku taal webiga cagtiisa
Ezcaray, baxsi yar oo miyi ah